आशिसको ‘एक्लो यो रात’ सार्वजनिक ! « MNTVONLINE.COM
गायक आशिष हल्क कार्कीको नयाँ गीत बजारमा आएको छ । उनले हालै आफ्नै शब्द रचना, संगीत, अभिनय तथा उत्कृष्ट गायनमा ‘एक्लो यो रात ’ बोलको गीत बजारमा लिएर आएका छन् । गीतलाई श्याम स्वेत र साईलीको एरेन्ज,मिक्सिङ्ग गरेका छन् ।
गीतको भिडियोलाई अनुप चापागाईंले निर्देशन गरेका छन् । शिल्पा थापा र आशिष कार्की नै अभिनय रहेको भिडियोलाई विकास दाहालले सम्पादन गरेका छन्  । ‘एक्लो यो रात’ बोलको गीतलाई विष्णु कार्कीको निर्माण गरेका छन् ।
नेपाली संगीत आकासमा प्रतिभावान गायक आशिष हल्क कार्कीको दमदार प्रवेश भएको छ । उनि बालापन देखिनै नेपाली गीत संगीतमा झुम्न रमाउने तथा विधयालय कालमा एच्छिक विषय संगीत लिई होलि गार्डेनमा वि मा अध्यन गरेका हुन् । विभिन्न सांगीतिक वाध्यबादन बजाउने निपुर्ण नव गायक आशिष हल्क कार्कीको आफ्नै सब्द रचना, संगीत, अभिनय तथा उत्कृष्ट गायनमा यही असोज ०५ गतेबाट आफ्नै आर्टिस्ट च्यानल मार्फत ‘एक्लो यो रात’ नेपाली संगीत प्रेमी, दर्शक, श्रोता माझ लिएर आएका छन् ।
केतन क्षेत्रीको ‘परदेशी आयो’मा देखिए विपिन (भिडियो)
र्‍यापर सुदिन पोख्रेलको ‘मृत्यु’ सार्वजनिक (भिडियो)
अभिनेत्री मालवी मल्होत्रामाथि चक्कु प्रहार गर्ने एक जना पक्राउ
दीपिका पादुकोणका म्यानेजरको घरमा एनसिबीको छापा, केही ग्राम ड्रग्स बरामद
श्रीमान् रोहनको हात समाउँदै मुम्बई फर्किइन नेहा कक्कर !
१ करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै लवीनाविरुद्ध महेश भट्ट पुगे बॉम्बे हाईकोर्ट !